Transfer Xiriirada, Video, Photos iyo iPod Music inay HTC
Haddii loo maleeyo in aad iPod ayaa ku kaydsan boqolaal doolar ku kacaya ee heeso iyo video iibsaday ka Lugood, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay u gudbiyaan si aad HTC Mid ka mid ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa dedeg folder Lugood ee kombiyuutarka iyo ku dhaqaajiyaan si aad HTC Mid ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, Lugood dhaco gaaban markii heeso ama video on your iPod yihiin goolka ka websites ka. Xaaladdan oo kale, si ay u sameeyaan iPod ay u kala iibsiga HTC, waxaad u baahan tahay in ay taageero ka ah qalab xisbiga saddexaad barbaro. Wondershare MobileTrans Waa qalab kala iibsiga phone xirfadeed, la siiyo fursad ay ku wareejin oo loogu badalo music iyo video ma iibsaday Lugood iyo kuwa u iibsaday inay aad HTC la mid click aad. Intaa waxaa dheer, xiriirada, sawiro, jadwalka iyo iMessages sidoo kale la koobiyeyn karaa waqti isku mid ah.
IPod wareejiyo HTC 1 Click
Ka mid phone Demi content in kale, iyo gurmad telefoonka ah una soo celiso kale ee 1 click.
Bedelka music ka iPod in HTC Mid ka mid ah / Wirefile / rabitaan iyo ka badan.
Copy xiriirada oo dhan, jadwalka, iMessages ka iPod in phone HTC.
Beddelaan wax audio iyo video in HTC qaab saaxiibtinimo.
Photos Maktabadda Photo ah, Camera Roll iyo xitaa iPhoto ka dhaqaaq iPod in HTC.
La shaqee qummanayn iPod xiriiri 5/4/3 socda macruufka 9/8/7/6/5, iyo qalabka kala duwan HTC. dheeraad ah ka baro >>
Isticmaal Mac ah? Fadlan si Wondershare MobileTrans u Mac
Iyadoo interface a smart oo kooban, si deg deg ah ay kuu fahmi karaa sida laga soo iPod wareejiyo HTC 1 click.
Ma ahan oo keliya Bedelka Music
Music ka sokow, waxaad isticmaali kartaa qalab si ay u gudbiyaan filimada, xiriirada, sawiro, podcast, Lugood U, TV Show oo dheeraad ah.
Sidayaasha Support Phone
Waxa ay taageertaa T-Mobile, qaran, AT & T, Verizon. Sidaas darteed, si aad HTC telefoonka ama kiniin kuu soo gudbin karaa iPod aan loo eegayn waxa side phone ay waa.
Kaabta iPod, Soo Celinta HTC
Qalab aad HTC ma in aad gacanta midig hadda? Ha welwelin. Waxaad sameyn kartaa in gurmad aad iPod hore oo soo celin markasta oo aad rabto. (Version Windows oo keliya ayaa sameeya)
IPod wareejiyo HTC
Labada aad iPod iyo qalab HTC gacantaada ku jiraa? Waa hagaag, waxaad si toos ah u wareejin karaan xogta iPod in HTC Mid ka mid ah / doonayay oo / ugaar isla markiiba.
Tallaabada 1. Ku rakib iPod in ay Tool Transfer HTC on PC
Waxa ugu horeeya waa in la rakibo iyo ordi iPod ay u qalab kala iibsiga HTC on PC Windows ah. Waxaa Orod, oo ay suuqa kala hoose baxa. Guji Start in uu u gudbo tallaabada xigta.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad ku rakibtay Lugood ama aan. Haddii aan, ku xidh.
Tallaabada 2. Isku Your iPod iyo HTC in PC via fiilooyinka USB
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan aad iPod iyo qalab HTC in PC. Labada qalabka la isla ogaado doonaa. Markaas, sida aad ka arki, si aad qalab iPod iyo HTC muuqan doonaan suuqa kala.
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, Calendar, iMessage, Music, Photos iyo Video laga soo iPod in HTC
View content aad rabto in lagu wareejiyo ka iPod. Markaas, riix Start Copy . In wada hadal pop-up ka, waxaad u arki karaan habka kala iibsiga oo dhan.
Your brand cusub HTC weli waa ku kala dambaynta? Isdeji. Waxaad tahay inay awoodaan inay gurmad xogta aad doonayso inaad ku iPod ah, una soo celiso qalabka HTC aad laguugu sahlo?
Tallaabada 1. Daahfurka iPod in ay HTC qalab kala iibsiga
Ka dib markii ay ku rakibidda, abuurtaan iPod in ay HTC qalab kala iibsiga ku computer Windows ah. Marka ay suuqa kala hoose muujinaysaa ilaa, u tag kaabta iyo Soo Celinta hab oo guji kaabta
Tallaabada 2. kaabta Xogta iPod in PC 1 Click
Bareesada ee ah USB cable Apple in ay ku xidhmaan aad iPod in kombiyuutarka. Qalabka iPod in HTC kala iibsiga si degdeg ah lagu ogaan doonaa oo muujiya aad iPod dhanka bidix. In dhexe waa content. Just samirsii aad rabto gurmad saxday. Markaas, waxaad tagtaa bilow Copy .
Tallaabada 3. Soo Celinta Your HTC la kaabta ah File iPod
Barkinta aad iPod iyo aad u hesho qalab HTC aad ku xiran. Riix Back to Homepage ka ​​dibna riix Soo Celinta . Marka qalab HTC la soo bandhigay dhanka midig, tag oo dooro gurmad iPod dhinaca bidix. Marka ugu, soo celin karo xiriirada, jadwalka taariikhda, music, video, sawiro iyo iMessages ka iPod gurmad file in HTC. Hubi in waxa aad doonayso in la soo celiyo iyo riix Start Copy .
Demi ka iPhone in HTC
Ka HTC Bedelka Content si iPhone
Copy Content ka HTC in HTC
Ka HTC Bedelka Content in iPad
Demi ka Android inay macruufka
Ka Phone haajiraan Data in Phone
HTC Best nidaameed Manager Alternative
> Resource > Transfer > Transfer Xiriirada, Video, Photos, Calendar, iMessage iyo Music ka iPod in HTC